CruiseTrends: Ndị njem na-edebanye njem njem na mbubreyo 2021
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ịtụ egwu » CruiseTrends: Ndị njem na-edebanye njem njem na mbubreyo 2021
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Ịtụ egwu • Akụkọ okomoko • News • Tourism • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Industrylọ ọrụ ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri na-egosi na ndị ahịa na-anọgide na-enwe nchekwube gbasara njem ụgbọ mmiri, na-ede akwụkwọ njem maka nkeji nke anọ nke 4
Nkwupụta ahụ kọwara foto nke ọnọdụ ndị ahịa maka njem ụgbọ mmiri maka February 2021
Nkwupụta ahụ na-enye ozi gbasara usoro ụgbọ mmiri kachasị ewu ewu n'etiti ndị na-azụ ahịa
Kacha rịọrọ nrughari ụgbọ mmiri, ahịrị na njem ụbọchị maka adịchaghị, okomoko na osimiri cruising kpughere
Emepụtara akụkọ CruiseTrends maka ọnwa nke ọnwa 2021 afọ taa. Nkwupụta a kọwara nkọwa dị iche iche na omume ndị ahịa maka njem ụgbọ mmiri maka February 2021.
Ndi okacha amara n’ulo oru Cruise emewo ihe omuma banyere inye ihe omuma banyere uzo ndi kacha ewu ewu n’etiti ndi n’acho ahia, tinyere otutu ndi nke ichoro irughari, uzo na ubochi njem.
CruiseTrends akụkọ maka February 2021 bụ nkọwa zuru ezu n'okpuru.
1. Adịchaghị / Contemporary: Royal ihe nracha nke mba
Na nke abụọ bụ Princess Cruises maka adịchaghị / dịkọrọ ndụ, Viking Ocean maka okomoko na AmaWaterways maka osimiri.
1. Premium / Contemporary: Mmasị nke Oké Osimiri
3. Osimiri: AmaSerena Na-esote na ewu ewu bụ ejị Mardi Gras maka adịchaghị / dịkọrọ ndụ, Oceania Riviera maka okomoko na America maka osimiri.
Nke na-esote na ewu ewu bụ North America maka adịchaghị / dịkọrọ ndụ, Mediterenian maka okomoko na North America maka osimiri.
1. Adịchaghị / Oge a: Fort Lauderdale
2. Okomoko: Miami
3. Osimiri: Amsterdam
Ọzọ na-ewu ewu bụ Miami maka adịchaghị / dịkọrọ ndụ, New York maka okomoko na New Orleans maka osimiri.
1. Adịchaghị / Contemporary: Cozumel
2. Okomoko: Kusadasi
3. Osimiri: Cologne Na-esote na ewu ewu bụ Nassau maka adịchaghị / dịkọrọ ndụ; Istanbul maka okomoko na Amsterdam maka osimiri.
2. Okomoko: Greece
3. Osimiri: Germany nke abuo bu USA maka ego / nke oge a na nke okomoko, Netherlands maka osimiri.
(Dabere na ọnụ ọgụgụ nke ọnụego rịọrọ maka ụdị ụlọ ọ bụla) 1. Premium / Contemporary: Balcony
1. Premium / Contemporary: 1 ụlọ
2. Okomoko: 1 cabin
3. Osimiri: Ime ulo 1
1. Premium / Contemporary: Disemba 2021
2. Okomoko: November 2021
3. Osimiri: Ọktoba 2021
Oge ntinye oge
1. Contemporary / Premium - edere ụbọchị 386 tupu oge
2. Okomoko - gbara akwụkwọ 349 tupu oge eruo
3. Osimiri - edere ụbọchị 341 tupu oge eruo
Ihe dị ọhụrụ na agwaetiti nke The Bahamas na February
Lufthansa na-akwụghachi ụgwọ ụgwọ ego 2021 niile dị ogologo oge